अंगूर सलाद - व्यंजनहरु
तत्काल भाँडोमा कसरी प्राकृतिक रिलीज गर्ने
ग्रिलमा स्केलपहरू पकाउने उत्तम तरिका
कसरी ताजा कोलार्ड सागस सफा गर्ने
एक मीठो आलुको भित्र कस्तो देखिन्छ
अंगूर सलाद एक छिटो र बहुमुखी साइड डिश वा मिठाई हो जुन वयस्कहरूले बच्चाहरू जत्तिकै मन पराउँछन्। यो मिठो, स्फूर्तिदायी, र अपूरणीय छ! रसदार अpes्गुरको एउटा साधारण संयोजन, कोरिएको टोपिंग, र कुचुर पिकनहरू कुनै पनि पटलक खानामा सबैभन्दा स्वादिष्ट थप गर्दछ।
मेयो र टमाटर संग ग्रील्ड चीज
अpe्गुर सलाद राम्रो बनाइएको छ त्यसैले यो घटना संग संगै राम्रो हो!
अंगूर सलाद कसरी बनाउने
के तपाईं ती व्यञ्जनहरू मन पराउनुहुन्न जुन छिटो र तयार गर्न को लागी सजिलो छ, अझै पनी समीक्षा जित्ने प्रबन्ध गर्नुहुन्छ? यो यही अpe्गुर सलाद नुस्खा वितरण गर्दछ, यो शाब्दिक रूपमा सजिलो छ 1,2,3 को रूप मा।
धुनुहोस् र आधा अpes्गुर।
क्रीमी बेस मिक्स गर्नुहोस्।
सँगै सबै कुरा हलचल गर्नुहोस्।
यो अpe्गुर सलाद रेसिपी अविश्वसनीय रूपले बहुमुखी छ। पेकानको सट्टा, तपाईं अखरोट, काजू, वा तपाईंलाई मनपर्ने कुनै नट प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईं यो अpe्गुर सलाद मार्शमेलो क्रेमको साथ बनाउन सक्नुहुनेछ वा भ्यानिला दहीको केही चम्चा खैरो चिनीको साथ। म व्हीप्ड टपिंग प्रयोग गर्दछु किनकि यो द्रुत र सजिलो छ तर तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ फिटेको तर (यसमा स्वीटनर थप्न निश्चित गर्नुहोस्)।
तपाईं कसरी टर्की सॉसेज पकाउनुहुन्छ
अंगुर सलाद फ्रिजमा कति लामो हुन्छ
अंगूर सलाद स्वाद हुन्छ जब यो चिसो हुन्छ, त्यसैले फ्रिजमा राख्नुहोस् जब सम्म तपाईं सेवाको लागि तयार हुनुहुन्न। यदि तपाईं कूल ह्विप टपिंग वा दही प्रयोग गर्नुहुन्छ, तब यसले फ्रिजमा केही दिन राख्नेछ।
यदि तपाईं वास्तविक व्हीप्ड क्रीम प्रयोग गर्नुहुन्छ, या त एउटा क्यान वा होममेडबाट, त्यसपछि तपाईंको अpe्गुर सलाद पेकानहरूसँग सोही दिन सेवा गर्ने योजना गर्नुहोस्। यसमा फलफूल मिसिए पछि चाँडो क्रीमले यसको फ्लफनेस हराउँदछ, र यदि यो फ्रिजमा लामो समय सम्म रह्यो भने, यो झुल्कीमा परिणत हुनेछ।
अंगूर सलाद संग के सेवा गर्ने: अpe्गुर सलाद एकदम स्फूर्तिदायी र प्रकाश हो, यो कुनै पनि खाजा वा डिनरको लागि एक मिठाई हो, बर्षको कुनै पनि समय। तर कहिलेकाँही तपाइँ तपाइँको प्लेट मा एक साइड डिश को रूप मा मीठा केहि चाहानुहुन्छ। यो मनमोहक केहि साथ सेवा, जस्तै पसल , वा ग्रिल गरिएको कुखुराको स्तन !
अधिक मीठा सलादहरू खोज्नुहोस्
एम्ब्रोसिया सलाद - उर्फ cup कप सलाद, यो क्लासिक बनाउन सजिलो छ!
करोडपति क्रेनबेरी सलाद - बच्चाहरूलाई यो मन पर्छ
वाल्डोर्फ सलाद - c लासिक
वाटरगेट सलाद - मलाई र स्वादिष्ट!
क्रैनबेरी वाल्डोर्फ सलाद - वाल्डोर्फ सलादमा रमाईलो मोड
तयारी समय१० मिनेट कुल समय१० मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन अंगूर सलाद एक छिटो र बहुमुखी पक्ष डिश वा मिठाई हो कि वयस्कहरु लाई बच्चाहरु लाई ज्यादा मन पर्छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢। कप बीजविहीन अpes्गुर आधा
▢१ चम्चा ब्राउन सुगर
▢दुई औन्स क्रिम चिज नरम
▢½ चम्मच म्यापल एक्स्ट्र्याक्ट वा वेनिला निकाल्नुहोस्
▢१ कप कोरिएको टोपिंग जस्तै चिसो कोर्रा
▢१ कप पेकान काटिएको
क्रीम चीज, ब्राउन शुगर र मिहिन र चिकनी सम्म निकाल्नुहोस्। व्हीप्ड टिपिंगमा मोड्नुहोस्।
अpes्गुर र पेकन थप्नुहोस्।
यदि चाहानुहुन्छ भने तपाईले यस नुस्खामा ह्वाप्ड क्रीमको लागि व्हीप्ड टपिंगलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ।
सेवा दिँदै:०.०कप,क्यालोरिज:१88,कार्बोहाइड्रेट:19g,प्रोटिन:दुईg,मोटो:१२g,पागलिएको बोसो:3g,कोलेस्ट्रॉल:।मिलीग्राम,सोडियम:१मिलीग्राम,पोटासियम:२१4मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:१g,भिटामिन ए:१०IU,भिटामिन सी:२.6मिलीग्राम,क्यालसियम:०मिलीग्राम,फलाम:०..6मिलीग्राम
कीवर्डअpe्गुर सलाद कोर्ससलाद पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।